Adana mba. Nnukwu ihe na-ewe oge. Nwee ndidi. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Na ndụ, ị nwere ike iche ọnọdụ dị iche iche mgbe ọ ga-adị gị ka ịhapụ gị. Nwoke tozuru okè ma mara ihe agaghị eme ya! Cheta na onweghi ihe na-agbanwe agbanwe gaa nke ọma ka ịgbalị mbụ ahụ.
Madụ niile ndị ahụ na - eme nke ọma ị na-ahụ gburugburu gị taa abụghị ndị ọzọ ma ọ bụghị ndị ọzọ na - anabataghị ọdịda. Ha nwere ike daa na ndụ ha otu nde ugboro, mana ha anabataghị ya otu mgbe. Ha bụbu ndị na-agba mbọ ugboro ugboro.
Ndụ abụghị àkwà Roses, n'okporo ụzọ a nke ịzọ ụkwụ, ị nwere ike ịchọta ihe isi ike, mana ọ ga-agara ndị na-aga n'ihu n'otu ụzọ ahụ n'agbanyeghị nsogbu niile siri n'ụzọ ahụ.
Istkwụsi ike bụ ihe dị oke mkpa iji kpebie ma ị gaghị enwe ike nweta ihe ịga nke ọma na ndụ gị. Ọ ga-enwe oge ị ga-eche ịnwe nkụda mmụọ, mana oge ịhapụ, accept ga-anabata ọdịda gị wee jụ iguzo ọtọ ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịnabata mmeri gị, egwuregwu ahụ ga-agafe ebe ahụ. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ị nweta ihe ịga nke ọma, ịkwesịrị inwe okwukwe na onwe gị ma mụta ịhapụ ịhapụ ihe ọbụlagodi mgbe e meriri gị ọtụtụ oge.
Cheta na ọ bụrụ naanị ndị na-adaghị mbà na-enwe ihe ịga nke ọma. Ndị ahụ hapụrụ bụ naanị ndị na-enye ngọpụ maka ndụ ha niile. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ịbụ onwe gị dịka ihe atụ maka ụwa, mụta ịrụ ọrụ, kama ịnakwere ọdịda gị.
Nwee ndidi ma nye onwe gị oge. Ihe anaghị eme n'abali. Gaghị ahụ onwe gị ka ọ guzo ọtọ n'oge oke nke ihe ịga nke ọma n'abali. Ikwesiri inye onwe gi oge zuru ezu iji gaa n’ihu rue mgbe ị ruru ogo ahụ.
N'otu ụzọ ahụ, ihe na-ewe oge ịme. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-ada ada naanị n'ihi na enwere ha ndidi na etiti oge. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ị nweta ihe ịga nke ọma, ịkwesịrị ịghọta uru ịnabata ọnọdụ dịka ha na-abịa, ma ka na- mee ka okwukwe gị sie ike. Nwee nchekwube, ị ga - enwetakwa ihe ọ bụla ị tụrụ anya ya!
Akwa mkpali Quotes
Akwa Quotes Banyere Ndụ
Akwa Quotes nke amamihe
Quest Kachasị Ego
Ahapụkwala Quotes na-akpali akpali
Akwụsịla ịnwale Quotes
Na-echeta mgbe niile. Ọrụ ebube na-eme kwa ụbọchị. - Amaghi ama
Na-echeta mgbe niile na ọrụ ebube na-eme kwa ụbọchị. Ọtụtụ mgbe, anyị na-eche na ihe agaghị aga…
Ndụ bụ nnukwu onyenkuzi na mgbe ị na-amụtaghị mmụta, ọ ga-ekpeghachi ya. - Amaghi ama
Ndụ bụ ezigbo onye nkuzi nke na mgbe ị na-amụghị ihe, ọ ga-emeghachi itself
Ọ bụrụ n’uche ka ọ dịrị, ọ ga-adị. - Amaghi ama
Oge ụfọdụ, ịkwesịrị ịmụ ka ịhapụ ihe! Na ndụ, anyị na-ahụ ndị mmadụ, ihe, na ọkwá,…
Onweghi onye ndu gi zuru oke, meekwa ka ighota ya, karie ka o…!